के तपाई दिनहुं कोक पिउनुहुन्छ ? यो सेवन गरेको १ घण्टा भित्र शरीरमा के-के हुन्छ ,थाहा | Ekhabar Nepal
स्वास्थ्य जेठ २२ २०७५ ekhabarnepal
सफ्ट ड्रिंक्ससँग जोडिएको एउटा समाचारले विश्वमा खलबली मच्याएको छ । ब्रिटेनका पूर्व फार्मास्टिक नीरज नाइकले आफ्नो एक ब्लगमा कोल्ड ड्रिंक्स खाएपछि शरीरको भित्र हुने प्रभावका बारेमा केही कुरा बाहिर ल्याएका छन् । उनले यस ब्लगमा कोकाकोला खाएको १ घण्डापछि शरीरमा के–के हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर ल्याएका छन् ।डेली मेलका अनुसार नाइकले एक ग्राफिकका माध्यमबाट बताएका छन् कि कोल्ड ड्रिंक्सले शरीरको आवश्यक खनिज पदार्थ बाहिर ल्याउँछ र मानिस मानसिक र शारीरिक रुपमा बदलिन थाल्दछ ।
पहिलो १० मिनेटः जब तपाई एउटा कोकाकोला खानुहुन्छ तब तपार्यको शरीरमा १० चम्चा चिनी भित्र जान्छ । योमात्रा २४ भण्टामा लिएको चिनीको मात्रा बराबर हुन्छ । अचानक यति मिठो खाइपछि तपाईलाई बान्ता पनि हुन सक्छ तर त्यसमा मिसीएको फास्टोरिक एसिडका कारण यसो हुँदैन ।
२० मिनेटपछिः कोक आएको २० मिनेटपछि खाने मानिसको ब्लड सुगर एकदमै बढ्छ । जसका कारण शरीरको लिबरले शरीरमा प्रतिक्रिया गर्छ र माटोपना बढ्न जान्छ ।
४० मिनेटपछिः त्यसपछि उसको शरीरमा क्याफिनको मात्रा छिट्टै बढ्दै जान्छ । अर्कोतर्फ ब्लड प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ । जसका कारण तपाईको लिबरले रगतमा अझ बढी चिनीका मात्रा पुर्याउँछ । अनि मस्तिष्कमा रगत जान कम हुन्छ ।
४५ मिनेटपछिः त्यसपछि तपाईको शरीरलाई मादक पदार्थ सेवन गरेको जस्तो लाग्दछ । शरीरले डोपामाइनको उत्पादन बढाउँछ र दिमागको खुसी दिने भाग सक्रिय बनाउँछ ।
६० मिनेछपछिः खाएको १ घण्टापछि तीन प्रक्रिया हुन्छ ।
२. क्याफिनलाई तरल बनाउने गुणले असर देखाउन थाल्छ । अनि तपार्यलाई पटकपटक पिशाब लाग्न थाल्छ । जसका कारण तपाईको शरीरबाट क्याल्सियम, मेग्निसियम र जिंक र सोडियम बाहिर जान्छ जुन तपाईको हड्डीमा जानुपर्ने हो ।
३. जसरी यो प्रक्रिया हुन्छ । मिठोपनको असर बढ्दै जान्छ । अनि तपाई अल्छी बन्न थाल्नुहुन्छ । कोकमा भएको पानी यूरिनद्धरा बाहिर निक्लन्छ । यसरी कोक पिउनाले तपाईको हडडी र दाँतलाई आवश्यक पर्ने खनिज बाहिर निक्लिन्छ ।